जब प्रतिस्पर्धी मोबाइल वालेटहरु 'खल्ती' र 'इसेवा' लाई 'आइएमई पे' ले भन्यो- 'ह्याप्पी बर्थडे'... - Technology Khabar
» जब प्रतिस्पर्धी मोबाइल वालेटहरु ‘खल्ती’ र ‘इसेवा’ लाई ‘आइएमई पे’ ले भन्यो- ‘ह्याप्पी बर्थडे’…
नेपाली बजारमा करिब एक दर्जन मोबाइल वालेटहरु संचालनमा छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुनेमा इसेवा, खल्ती, आइएमईपे, प्रभु पे वालेटलगायत केहि मोबाइल वालेट कम्पनीहरु मात्र छन् ।
यी कम्पनीहरु बीच पनि बजारमा निकै तिब्र प्रतिस्पर्धा रहेको छ । बजारमा कसले धेरै ग्राहक बनाउने र कति धेरै सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने चर्को प्रतिस्पर्धा रहेको छ । यसले कहिलेकाँही ग्राहकहरु नै झुक्किने र भ्रमित हुने गरेका छन् ।
तर यहि बीचमा मोबाइल वालेटहरुले डिजिटल पेमेन्ट र मोबाइल वालेटको बजार बिस्तार गर्न सामूहिक भुमिका समेत खेल्ने गर्दछन भने एक आपसमा तिब्र प्रतिस्पर्धाका बिच सहृदयी समेत हुने गरेका छन् ।
यसैको एक उदाहरण आइएमई पेले देखाएको छ ।
आइएमई पेले इसेवा र खल्ती वालेटलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएको छ । खल्तीले आजै ४ वर्ष पुरा गरेको छ ।आइएमई पेले इसेवालाई सोमबार १२ वर्ष पुरा गरेकोमा शुभकामना दिएको थियो भने आज खल्तीलाई समेत वार्षिकोत्सवको शुभकामना दिएको छ ।
आज भएको खल्ती वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर सोशल मिडिया ट्विटरबाट आइएमई पेले शुभकामना दिएको छ । जसमा ‘खल्तीमा थप एक वर्ष थपिएको र यसले दुबैको साझा लक्ष्यमा एक कदम अगाडि बढेर लक्ष्य देखाउने उल्लेख गरिएको छ।’
Today, one more digit is added to your age, one that demonstrates another year of overcoming, achievement &a step forward to our common goal.
Happy birthday @KhaltiOfficial
Cheers to all that you have been doing and many more to come.
— IME Pay (@imepay_official) January 26, 2021
आइएमई पे यसअघि पनि हिजो मात्र इसेवाको १२ वर्ष पुरा गरेको अवसरमा बधाई तथा शुभकामना दिएको थियो । जसमा दुबै एउटै दौडमा रहेपनि डिजिटल नेपालको अभियानमा भने सँगै रहेको उल्लेख गरेको थियो । जसमा इसेवाले १२ वर्षमा गरेको योगदानलाई स्मरण गर्दै बधाई दिएको थियो ।
Technically we are running the same race but we are only two sides ofacoin, each carryingabigger purpose which is to digitalize Nepal.Cheers to the 12yrs of continuous effort that you have dedicated to this industry & to our country asawhole Happy 12th Birthday @eSewaNepal
— IME Pay (@imepay_official) January 25, 2021